Yeroo galmeen nama tokkoo oliin gulaalamu, galagalcha gulaalame xabbootti makuun ni danda`ama. Kan barbaadamu galmeewwan adda ta`an qofaa fi jijjiirraa kuusaa keessatti kan hin dhuunfamne - barruun xabboo biraan hundi isaaniiyyuu diqama walfakkaachuu qabu.
Galmee xabboo galagalchoota hunda itti makuu barbaade bani.
Qaaqa irraa galmee galagalchaa fili. Yoo jijjiirraan tarreeffamaan galmee xabboorratti hin taane ta`e, garagalchi xabbootti ni makama.
Galmee xabboo irratti jijjiirraan yoo hojjetame, dogoggorri qaaqa makinsi milkaa`uu dhiisuu isaa beeksisu ni mul`adhata.
Galmeewwan erga maktee booda kuusaa jijjiirraa garagalcha galmee xabboo keessaa jiru irraa ni ilaalta.
Title is: Makinsa Fooyya`oota